Ilmo diyaarad ku dhex dhashay oo lagu wareersan yahay muwaadnimada dalkiisa – SBC
Ilmo diyaarad ku dhex dhashay oo lagu wareersan yahay muwaadnimada dalkiisa
Posted by editor on October 1, 2011 Comments
Saraakiisha ayaa isku dayaysa tan iyo talaadadii in ay xaqiijiyaan dhalashada ama jinsiyada ilmo ku dhex dhashay diyaarad hawada ku jirtey oo gooshaysay dusha sare ee biyahaa caalamiga ah ee aanu dalna laheyn, iyadoo diyaaradaasi ka timid wadanka Filipiin kuna socotey dalka Mareykanka.
Haweenay uur leh oo u dhalatey dalka Filibiin lagu magacaabo Aida Alamillo, 41 sano jir ah ayaa iyadoo saaran mid ka mid ah diyaaradaha shirkada diyaaradaha Philippine Airlines Fight 104 kana ambabaxdey magaalada Manila ee caasimada Filipiin ay Isniintii dareentey inay fool tahay.
Mudo yar ka dib diyaaraduna u jirto afar saacadood wax ka yar magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka hawadana ku jirtey masaafo 30 kun oo cagood (feet) waxay dhashay wiil caafimaad qaba oo miisaankiisu yahay 2.7km.
Shaqaalaha duulimaadkaasi ayaa haweenayda geeyey qayb gaar ah oo ka mid ah fadhiga qaybta ganacsiga (bussniss-ka) iyagoo ka codsadey rakaabka in ay caawiyaan haweenadaasy, waxaana dadkii ka soo dhex baxay sadex qof oo kalkaaliyayaal caafimaad ah kuwaasi oo caawiyey haweenayda sida uu sheegay Telefishinka ABC.
Rakaabkii kale ee diyaarada ayaa hal mar sacab is qabadsiiyey ka dib markii ay maqleen in haweenaydii ay ilmo dhashay.
“Ma fileyn inaan ilmo ku dhalayo halkaasi, laakiin waa wax dhacay” ayay tiri Alamillo oo sheegtey in dhakhtarkeedu uu fasax u siiyey inay duulimaad raaci karto.
Alamillo waxay ku sii jeeday gobolka Massachusetts iyadoo ay safarkeeda ku wehliyeen markii ay duulimaadka soo raacaysay 3 ilmood oo ay dhashay balse waxay diyaarada ka degtey iyadoo afar ilmood wadata.
Walaasheed oo lagu magacaabo Leoni Bauermeister kuna nool magaalada ,Beverly, Mass ee gobolka Massachusetts ayaa u sheegtey myFOXboston.com in Alamillo ay dalka Mareykanka u soo galeysay soo galooti ahaan iyada iyo sadex caruur ah oo ay dhashey, balse ilmaha kale uu sidaasi ku noqdey muwaadin Mareykanka ah.
Jennifer Vaughn, oo ka tirsan xarunta caluunta socdaalka( Center for Immigration Studies) ayaa sheegtey in hadii ilmuhu uu ku dhasho bad furan dusheeda wuxuu qaadanaya jinsiyada ama dhalashada ay waalidkiis ay haystaan, hadiise ilmuhu uu ku dhasho hawada khadka hawada Mareykanka wuxuu noqonayaa muwaadin Mareykanka ah.
Waxaan umalayn inayba ogayd inay maalintaas dhalayso markaasna safarkeeda kusoo aadisay si ay sharci maraykan ah uhesho ama kusoo caanbaxdo